Slackware: Sbopkg နှင့် SlackBuilds, package များကိုအလွယ်တကူ install နိုင်သည် Linux မှ
Slackware: Sbopkg နှင့် SlackBuilds, package များကိုအလွယ်တကူ install နိုင်သည်
DMoZ | | applications များ, GNU / Linux များ, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ဤကြီးမားသောဖြန့်ဖြူးမှုကိုဖျက်စီးရန်ကြိုးစားသည့်ဆောင်းပါးတွဲများကို ဆက်လက်၍၊ ကျွန်ုပ်၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်အထုပ်အတွင်းတပ်ဆင်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကိုတင်ပြရန်အချိန်တန်ပြီ Slackware ကိုတီထွင်အဲဒါအကြောင်းပါ SlackBဟုတ်တယ် နှင့်သေးငယ်တဲ့ application ကို အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုရိုးရှင်းစေတယ် သူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲသောအခါပို။ ပင်ဘဝ, Sbopkg ။
ဒါဟာဒီ tool ကိုဖော်ပြရကျိုးနပ်သည် မှီခိုမှုကိုဖြေရှင်းမထားဘူး များအတွက်အများဆုံး tools များလိုပဲ Slackware ကိုတီထွင်သို့သျောလညျး, ကြှနျုပျတို့နောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, ဒီအလွန်ခံနိုင်သောတာဝန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ပထမ ဦး စွာ package များကို install လုပ်ခြင်း၏ "ရိုးရာ" နည်းလမ်းကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်သည် Linux ကို ၎င်းသည် source code မှစုစည်းနေသည်။ ၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သော်လည်းအနာဂတ်ပြproblemနာတစ်ခုအဖြစ်ပြနိုင်သည်။ ဥပမာ install လုပ်ထားသော package သည် update လုပ်ရန်ကြိုးစားသည်နှင့် system administrator (သင်) compilation တန်ဖိုးများကိုမေ့သွားသောအခါ။
ဒီအဆင်မပြေအမျိုးအစားကိုရှောင်ရှားရန် Slackware ကိုတီထွင် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ် ဦး ကိုအသုံးပြုရန်ဖန်ဆင်းခဲ့သည် ဇာတ်ညွှန်း ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျှောက်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်၊ အထုပ်တစ်ခုစီ၏ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရန်အတွက်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာထိုအထုပ်၏ဗားရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စနစ်ကိုအကြောင်းကြားသော variable ကိုပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်။
၏ဤစုဆောင်းမှုရန် script များ သူတို့ကိုခေါ်ခဲ့တယ် SlackBuilds သူတို့ကအနည်းဆုံးပြောရလျှင်အကြွင်းမဲ့အာဏာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ အနန္တတန်ခိုးရှင်အားဖြင့်စေလွှတ်ခဲ့သည် God Tux ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာတွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့ကြသောအသုံးပြုသူများအတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အသိပညာထွန်းလင်းမှုအဆင့်သို့ရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည် Slackware ကိုတီထွင် (အမေကကျွန်မမှာစိတ်ကူးတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်) ...
၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းမှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ ပထမ ဦး စွာ Slackbuilds packages များစုဆောင်းထားသောတည်နေရာရှိစာမျက်နှာသို့သွားသည်။ http://slackbuilds.org/.
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော package များကိုရှာဖွေရန်ယင်း၏ပေါင်းစည်းထားသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုသည် ရှာဖွေကြစို့ "Flash" ဆိုတော့ရှာဖွေမှုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ package တွေစာရင်းရမယ်။
ငါတို့ရလိမ့်မယ် သတင်းအချက်အလက်အထုပ် ဥပမာအားဖြင့်၎င်းင်း၏ဗားရှင်း၊ အတိုချုပ်ဖော်ပြချက်၊ ၎င်း၏တရားဝင်စာမျက်နှာ၊ ၎င်းသည်ရရှိနိုင်သည့်ဗိသုကာများမှအရင်းအမြစ်ကုဒ်ရရှိနိုင်မည့်တရားဝင်ကူးယူထားသောလင့်များနှင့်ကူးယူခြင်း SlackBuild အဘယ်သူသည် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့ download လုပ်ခဲ့တယ် အရင်းအမြစ်ကုဒ် နှင့် SlackBuild.
ငါတို့ထုတ်ယူသည် el SlackBuild.
ငါတို့ရွှေ့တယ် el အရင်းအမြစ်ကုဒ် ၏ directory ထဲတွင် (compressed) SlackBuild ငါတို့ပဲထုတ်ယူခဲ့တယ်။
ငါတို့ဖွင့်တယ် ကျွန်တော်တို့၏ console ကို ၏ directory ထဲတွင် SlackBuild.
ယခု ကျနော်တို့အထုပ်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ် တပ်ဆင်နိုင်သည်၊ သို့သော် ဦး စွာလိုအပ်သည် လော့ဂ်အင် como အမြစ်.
မသန်စွမ်း ဗိသုကာပညာ de 32-bits ငါတို့ရိုက်သည်«. /flash-player-plugin.SlackBuild »။
မသန်စွမ်း ဗိသုကာပညာ de 64-bits ကျနော်တို့« Arch = x86_64 ရိုက်ထည့်ပါ . /flash-player-plugin.SlackBuild »။
၏ဖြစ်စဉ်ကို ထုပ်ပိုး နောက်ပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်သူကငါတို့ကိုပေးတယ် ခရီးစဉ် သူဘယ်မှာလဲ အထုပ်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်ဤကိစ္စတွင် "/tmp/flash-player-plugin-11.2.202.243-x86_64-1_SBo.tgz" ဖြစ်သည်။
နုတ်ပါ install el အထုပ် အားဖွငျ့ဖွစျသညျ tool တစ်ခု Que Slackware ကိုတီထွင် ဒီတာဝန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသည် (နောက်ပိုင်းရေးသားချက်များတွင်ဤကိရိယာများကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါမည်။ ) \_ t အကြောင်းပါ installpkg.
ငါတို့ရိုက်တယ် "Installpkg /tmp/flash-player-plugin-11.2.202.243-x86_64-1_SBo.tgz"
၏ဖြစ်စဉ်ကို တပ်ဆင် အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားလျှင်၊ အထုပ် installed ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မြင်နိုင်သည်အတိုင်း, ဖြစ်စဉ်ကို ဒါဟာမဖြစ် ဇော်ဂီရောင် ရှုပ်ထွေးဟုတ်ကဲ့ တတျနိုငျသ ထွက်လှည့် အနည်းငယ် ငြီးငွေ့ အခြေခံအားဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ install ချင်သော package သည်များစွာသောလိုအပ်လျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း မှီခိုတစ်ခုချင်းစီကို download လုပ်ဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း SlackBuild သည် အရင်းအမြစ် ဖြန့်ဖြူးမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်တစ် ဦး ထက်ပိုသောဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ ငါတို့ရေတွက် တစ်ဦးနှင့်အတူ tool တစ်ခု အဲဒါကိုလုပ်ရမယ် install applications များငါအပြင်းအထန်တောင်းဆိုသော်လည်း မှီခိုမှုကိုမဖြေရှင်းပါနဲ့"Sbopkg" ။
Sbopkg, ဒါဟာဖြစ်ပါသည် tool တစ်ခု en command line Que ဤ sincronizada ယင်းနှင့်အတူ သိုလှောင်ရုံ de Slackbuilds များ de slackbuilds.org (SBo) ဤသို့သောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထုပ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ ဦး စွာသွားရမည် slackbuilds.org ၎င်းတွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းစစ်ဆေးရန်၎င်းင်း၏မှန်ကန်သောအမည်နှင့်လိုအပ်သောမှီခိုမှုကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုခြင်း ejemplo တပ်ဆင်ခြင်း လွန်ခဲ့သော, « Flash-player-plugin », ငါတို့ခြားနားချက်ကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
အလုံအလောက် သော့ "Sbopkg -i flash-player-plugin"
မှတ်စု: NO ဒါကြောင့်ငါတို့မ download လုပ်ဖို့လိုအပ်ပေသည် SlackBuild ni el အရင်းအမြစ်ဒီ tool ကအရာအားလုံးကိုဂရုစိုက်ကတည်းက။
ငါတို့အတည်ပြုတယ် ဘာကို install လုပ်ချင်လဲ စာရိုက်တယ် "P" ။
ပြီးတော့ငါတို့ရလိမ့်မယ် အထုပ် ya ထည့်သွင်းထားသည် ဘာပဲငါတို့ဗိသုကာအဘို့။
မှတ်စု: ယခင်က ကျနော်တို့ရပါမည် ရှိ ထည့်သွင်းထားသည် sbopkg (အောက်ပါအသေးစိတ်လုပ်ငန်းစဉ်), ဒီလျှောက်လွှာကို console မှာသုံးတယ်၊ ငါတို့ဘယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာဂရုမစိုက်ဘူး။
SBOPKG ကို install လုပ်ခြင်း
မသန်စွမ်း install sbopkg ကျနော်တို့က၎င်း၏တရားဝင်စာမျက်နှာကိုသွားရပေမည် ကုန်ချ y နားလည်ပါတယ်
ငါတို့ဖွင့်တယ် ကျွန်တော်တို့၏ console ကို ကြောင်း directory ထဲမှာနှင့် ငါတို့ရိုက်တယ် "Installpkg sbopkg-0.36.0-noarch-1_cng.tgz" (ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ သင့် SER como အမြစ်)
ငါတို့သည်ပြီးသား ထည့်သွင်းထားသည် sbopkg ။
ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့ sbopkgပထမဆုံးလုပ်သင့်တာက တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ် su အခြေစိုက်စခန်း de ဒေတာ နှင့်အတူ slackbuilds.org, ဒါအတွက် ငါတို့ရိုက်တယ် "Sbopkg -r" ။
တခါ ပြီးစီးခဲ့သည် la ထပ်တူပြုခြင်းကျနော်တို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ install မည်သည့် အထုပ် မှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည် sbopkg.
ထွက်သယ်ဆောင်ရန် မောင်းနှင်မှု de packages များ ဖြတ်. sbopkg ငါတို့မှာရှိတယ် dos ရွေးချယ်မှုများ, ဂန္ထဝင် linea de ပညတ်တော်တို့ကို ဒါမှမဟုတ် sbopkg မိမိအခုနှစ် အင်တာဖေ့စ သင်တန်းပို့ချ.
ဒါဟာပြီးသားမြင်ကြခဲ့သည် ejemplo လွန်ခဲ့သော ၏လမ်း install un အထုပ် နှင့် sbopkg en linea de ပညတ်တော်တို့ကို, ဒါပေမယ့်အဘယျသို့ငါတို့လိုလျှင် install un အထုပ် Que လိုအပ်တယ် မှီခို, အထုပ်တစ်ခုချင်းစီကို install ရှောင်ရှားရန် လွတ်လပ်စွာအတွင်း၌ထည့်သွင်းရန် package အားလုံးကိုသတ်မှတ်နိုင်သည် နှစ်ဆကိုးကား («) ။
ဥပမာအားဖြင့်, အဘို့ install "Supertuxkart" သည် "OpenAL" နှင့် "irrlicht" နှစ်ခုမှီခိုရန်လိုအပ်သည်။
စာရိုက်တာထက် အထုပ်တစ်ခုစီ အားဖြင့် ခှဲခွားsbopkg -i "OpenAL irrlicht supertuxkart" ကိုလိုင်းတစ်ခုတည်းတွင်ရိုက်ထည့်သည်။
မှတ်စု: အထုပ်တစ်ခုစီသည်နေရာတစ်ခုနှင့်မည်သို့ကွာခြားသည်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ အစုနှစ်ဆကို quotes («) တွင်ပူးတွဲထားသည်။
ဒီတော့ supertuxkart ကို ၄ င်းနဲ့အတူရမယ် မှီခို ကုန်းပတ်.
တစ်ဘို့ စာရင်းအပြည့်အစုံ အပေါ် ရွေးချယ်မှုများ ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုကြောင်းအထုပ်ကိုင်တွယ်၏ sbopkgနှင့်လုံလောက် သော့ console ပေါ်မှာ လူ sbopkg.
La အခြားရွေးချယ်စရာ ကမ်းလှမ်းသည် sbopkg၎င်း၏ interface ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် သင်တန်းပို့ချ။ အဲဒါကိုသုံးဖို့ပဲ သော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ console မှာ "Sbopkg"
ဘာပဲ စတင်လိမ့်မည် una အင်တာဖေ့စ ငါတို့ရှိသည်စောငျ့ရှောကျနိုငျဘယ်မှာ ရွေးချယ်မှုများ ငါတို့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မယ် ထပ်တူပြု repositories က, install, ဖယ်ရှားရန်, actualizar အခြားသူများအကြား packages များ, က၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအလွန်ရိုးရှင်းပြီးငါတို့လိုအပ်သောရွေးချယ်မှုများရွေးချယ်ဖို့လုံလောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရရင်ဒါဟာစနစ်တစ်ခုရရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းပဲ Slackware ကိုတီထွင် ကျွန်တော်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူရရှိနိုင် packages များ၏အရေအတွက်ကိုပေါင်းစပ်လျှင်အလွန်ခံနိုင်ရည် Slackware ကိုတီထွင် နှင့်မှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည် SlackBuilds ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအလွန်ကြီးစွာသောဖြန့်ဖြူးများအတွက် packages များအလွန်ရှည်လျားသောစာရင်းရလိမ့်မယ်။
အကြောင်းပြချက်မရှိတော့ဘူး slackware ကိုသုံးရအောင် !!! ...
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Slackware: Sbopkg နှင့် SlackBuilds, package များကိုအလွယ်တကူ install နိုင်သည်
51 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ hehehe ။ အမြဲတမ်းဒီ distro ကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်၊ တော်တော်ကြည့်ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ Debian နဲ့ Gentoo လို logo လိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အချက်အတွက်သူ့ကိုမထည့်သွင်းဘူး။ ဤပံ့ပိုးမှုများတန်ဖိုးထားကြသည်။ သင်သည် Slackware နှင့် Perseus နှင့် Fedora နှင့်တူသည်၊ Elav သည် Debian နှင့်လည်းကောင်း၊ KZKG ^ Gaara - Arch XD နှင့်တူသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! ...
သင်အခွင့်အလမ်းပေးသောအခါသင်အမှတ်တံဆိပ်၏အသွင်အပြင်သည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုသင်နားလည်လိမ့်မည်။ 😉 ...
သင်တန်းဟီဟီ ငါအဲဒါကို vm နဲ့စမ်းသပ်ပြီးတော့ hardware တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။
hmm ဒီတော့ငါ့ကို slackware ကိုကြိုးစားချင်လာအောင်လုပ်မထားဘူး။ Hahahaha ငါ operating system ၏စိတ်ဓာတ်၏ဖြစ်ရမည်:
ရိုးရှင်း၊ မြန်၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆော့ဗ်ဝဲအမြောက်အများ။
ငါ Arch နှင့်အတူအဆင်ပြေဘယ်မှာ: D. သုံးပြီး အဲဒါကကျွန်တော့်ကို Fedora ကိုပြန်သွားချင်တယ်။ D.
« Linux တွင် package များကိုထည့်သွင်းရန်“ ရိုးရာ” နည်းလမ်းသည် source code မှပြုစုသည်။ mmm က gentoo ကိုသတိပေးသည်။ အရာအားလုံးကိုပြုစုပြီး portage ကိုပိုကြိုက်တယ်😀
Slackware သည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူမြန်ဆန်သည်၊ တည်ငြိမ်ပြီးမှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကြီးမားသောဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် ...
ဟုတ်တယ်၊ Pacman အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်😉 ...
ဆိုလိုတာကတော့ Linux မှာဒါက Slackware နဲ့အခြားဖြန့်ချီမှုအားလုံးရဲ့အစဉ်အလာပါ။
သင်ဘာမှမစုဆောင်းစရာမလိုကြောင်းသင်သတိပြုမိသောမှတ်စုကိုသင်ဖတ်လျှင် sbopkg အားလုံးကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မည်။
ကောင်းပြီ, ငါပဲ Arch ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်း, ငါအချို့ bug တွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအားနည်းချက်တွေကို Arch မသုံးတော့ဘူး။
၎င်းသည် Core ၂ ခုကိုသာစစ်ဆေးသည် (ကျွန်ုပ်တွင် ၄ ခုရှိသည်)
ငါတည်ငြိမ်သော distro သွားချင်တယ်။
Slackware = တည်ငြိမ်သော + "လက်ရှိ"
Debian = တည်ငြိမ်သော (သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုထည့်သွင်းခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ် download လုပ်ထားသော isos အားလုံးက - ၎င်းသည် modules များကို install လုပ်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းသည် installation ကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်)
Slackware ကိုမျှ kernel ကို pae ရှိပါတယ် ???
kik1n ဖြစ်ပါက PAE အထောက်အပံ့ရှိသည်။
၎င်းသည်မလွယ်ကူပါ၊ အရာအားလုံးသည် package များနှင့်အဆင်ပြေပါသည်၊ သို့သော်မှီခိုမှုများကိုဖြေရှင်းသော package manager နှင့် distro တစ်ခုကိုကျွန်ုပ် install လုပ်နိုင်သည့်အခါဤအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်မမြင်ပါ။ မှီခိုစရာမလိုအပ်သောမည်သည့်အားသာချက်ကိုမှမမြင်နိုင်ပါ။ သင်သည် megabytes နေရာအနည်းငယ်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်ဘာသိသနည်း။
ငါသည်လည်း Arch နှင့်အတူနေဖို့။
ကောင်းပြီယခုငါ Ubuntu ကိုအခြား distro ထက်အကြိမ်တစ်ထောင်ပိုနှစ်သက်သည်။ ငါတည်ငြိမ်သောဗားရှင်း, လှိမ့နှင့်စမ်းသပ်ခြင်းကနေ Linux ကိုအားလုံးနီးပါးမှတဆင့်ရောက်နေတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Ubuntu ကကောင်းတယ်၊ အရမ်းဆိုးတယ်။ Cinnamon နဲ့ Mate တို့သိပ်မကောင်းဘူး၊ အလန့်တကြားဖြစ်မနေဘူး။ အဲလိုဆိုရင် Arch သို့မဟုတ် Fedora ထက်ပိုကြိုက်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ဟေး၊ ထိုရှုထောင့်များတွင်လည်းတိုးတက်လိမ့်မည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါ့တတိယ option ကိုနေဆဲဖြစ်သည်။
ယခုငါအမှုအရာပြုစုသော distros စိတ်ဝင်စား, သိရန်နှင့်သူတို့ကသူတို့ပိုမြန်ဖြစ်ကြောင်းပြောသောကြောင့်, သူတို့သည်မြည်းအတွက်နာကျင်မှုဖြစ်ပေမယ့်အမှန်တရားငါဘာမှစုဆောင်းဘယ်တော့မှနိုင်, ဒါကြောင့်ငါ့ကိုထွက်ကူညီ ။
စကားမစပ်, သင် slackbuild လုပ်ဖို့ကယ့်ကိုပိုမိုလွယ်ကူပါသလားသို့မဟုတ်ရိုးရာ compiling နှင့်အတူအများကြီးမပြောင်းဘူးလား
Slackware သည် pkgtool ဖြစ်သော package manager ကိုယူလာသည်။ Slackbuilds သည် installation DVD ထဲတွင်တရားဝင်မဟုတ်သောပရိုဂရမ်များအတွက်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ Arch Linux ကို abs နဲ့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါသိပ်မကောင်းဘူး၊ compile လုပ်ဖို့ငြင်းဆန်တဲ့ package တွေအများကြီးရှိတယ်၊ မဟုတ်ရင် sbopkg ကိုသုံးတာလောက်လက်တွေ့ကျတဲ့နည်းပဲ။
မင်းရဲ့ရှင်းပြချက်ကိုငါကြိုက်တယ် | တရား ၀ င်နှင့်တရားဝင်မဟုတ်သောအခြားရင်းမြစ်များရှိသော်လည်းဆော့ (ဖ်) ဝဲတွင်ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုထည့်သွင်းရန်တူညီသောတရားဝင်ရှိကြောင်းသတိရပါ။ | slackware ထဲမှာဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။ မင်္ဂလာပါ
အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုတရား ၀ င်အထုပ်တစ်ခုအဖြစ်တွေ့ရှိသည်သို့မဟုတ် SlackBuild အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
DMoZ သည်ကောင်းမွန်သောဆော့ဝဲလ်ပါသည့်တည်ငြိမ်။ မြန်သောဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်သော Slackware အကြောင်းအသိပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အားအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်ကိုယုံကြည်သော်လည်း၊ ဤနိဂုံးချုပ်သို့ရောက်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုတပ်ဆင်ပြီးယင်း၏ကိရိယာအားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ခင်ဗျားကို Mr. Linux နဲ့သဘောတူတယ်
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ရပ်ရွာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားတွင်ဤ distro နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်နှင့်ဤကြီးမြတ်သော site ပေါ်တွင်ထက်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်ပြုလုပ်ရန် =) ...
DMoZ အလွန်ကောင်းမွန်သောပံ့ပိုးမှုဖြစ်သည့် Eric « AlienBOB » Hameleers ၏ 64-bit ဗားရှင်းကိုထိန်းသိမ်းသူအဖြစ် SlackBuilds ကိုရှာတွေ့နိုင်သည့်အခြားစာမျက်နှာများလည်းရှိသည်။ http://slackware.com/~alien/slackbuilds/ သို့မဟုတ်အီတလီစာမျက်နှာ http://www.slacky.eu/။ လွန်ခဲ့သောအချိန်ကကျွန်ုပ်သည် SlackBuilds.org တွင်ရှိနေသော package အချို့ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်ကထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်အကူအညီလိုသည်ကိုလေ့လာလိုလျှင်မေးမြန်းရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။
နောက်ဆုံးသော Alien SB တွေကိုသူတို့အရင် packs ဟောင်းတွေကိုအရင်စစ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ applications တွေထုပ်ပိုးပြီး installpkg နဲ့ install လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ slacky ဆီကိုငါသွားခဲ့တယ်။
သင့်တော်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့လေ့လာရမည်ကိုလေ့လာရန်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အချိန်ရှိပါကကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုတွင်စွဲနေပါကသင့်အားတိုင်ပင်ပါလိမ့်မည် ...
ရွှင်လန်း !! ...
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်ကငါစမ်းကြည့်တယ်၊ အဲဒါကလုံခြုံမှုခံစားရတယ်။ မှီခိုမှုကြောင့်ငါ့ကိုပြန်ပစ်ချ ...
အကယ်၍ ခင်ဗျားပြောခဲ့သလိုပဲ၊ သင့်ဘ ၀ ကိုလွယ်ကူစွာစုစည်းစရာမလိုဘဲလွယ်ကူစွာလုပ်နိုင်တဲ့ package တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကအဲဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Arch အပြင် arch အဖြစ်ပါ၊ အဲဒါဟာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်တယ်။ pacman နှင့်သူ၏အရာပျင်းရိအတွက်၎င်း၏တရားဝင် repository ကို compile ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားလေ့လာမှုကိုပေးသည်။ (ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်စာရိုက်ရန်အချိန်သို့မဟုတ်ဆန္ဒမရှိသောကြောင့်လည်းဖြစ်သည်) သို့သော် slackware အတွေးအခေါ်သည် Linux လောကထက် bsd လောက၏အတွေးအခေါ်နှင့်ပိုမိုနီးစပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အခြားအရာများအကြားမှီခိုကိုပြုစုခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်အရေးကြီးသနည်း။
အသုံးပြုသူအတွက်ဘဝကိုရိုးရှင်းစေသည့်ကိရိယာများရှိသည်အလွန်မှန်ကန်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သူတို့၏အတွေးအခေါ်နှင့်မကိုက်ညီဟုငါထင်သည်။ ကောင်းတဲ့ KISS တစ်ခုအနေနှင့်သူ၏အရာသည်ပုံသဏ္theာန်များကိုကြည့်ရှုရန် (အနည်းဆုံးအစတွင်) tabs များကို စုစည်း၍ ထားခဲ့ရန်ဖြစ်သည်။
ငါ vanilla packages များရှိခြင်းကအထူးစေသည်, နှင့် linux ချစ်သူများအားလုံး linux ကိုအထူးအရေးကြီးသောဖြစ်စေရန်နှင့်တစ်ခုခုလှူဒါန်းခဲ့သော distros လေးခုကြိုးစားသင့်ကြောင်းထင်, Debian, Slackware, Arch နှင့် Gentoo ။
ဒါတွေအားလုံးအတွက်၊ သင်ဟာ Slackware tutorials ကိုထည့်ဝင်ပေးတာ၊ များစွာသောအရာများမှာကွန်ယက်ပေါ်ရှိစပိန်ဘာသာစကားတွင်အနည်းငယ်သာရှိသည်ကိုသိရှိထားခြင်းကြောင့်များစွာကျေးဇူးတင်သင့်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကဒါပျော်စရာနှင့်ရိုးရှင်းအောင်လည်းတန်ဖိုးထားသည်။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ Slackware သည်အလွန် KISS ဖြစ်သည်။ မှီခိုရာများသည်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိခဲ့ပါ။ သင် SlackBuilds.org သို့ သွား၍ x package လိုအပ်သည့်မှီခိုမှုများကိုအမှတ်အသားပြုထားသည်။ သင်မှီခိုရမည့်အရာများအားလုံး၏မှီခိုရာနေရာများနှင့် console တွင်ဖော်ပြထားသည် လုပ်
#sbopkg -i "dep1 dep2 dep3 dep4 package"
နှင့် voila, အထုပ်ကိုဖုံးလွှမ်းမှီခိုနှင့်အတူ installed ...
ငါ Fedora ကိုအများဆုံးလွမ်းတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည် compile လုပ်ရန်မလို၊ slackbuilds၊ .txz သို့မဟုတ် .tgz package ကို install လုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်မှီခိုမှုကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင် compile လုပ်လိုလျှင် LFS တစ်ခုကိုရယူပါသို့မဟုတ် Gentoo ကို install လုပ်ပါ။ Slackware တွင်သင်လည်းအတူတူပင် compile လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်မည်သည့် distro ကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
အမှားမလုပ်မိအောင်၊ slackbuilds ကိုပြုစုရန်လိုသည်၊ သို့သော်ရလဒ်မှာတပ်ဆင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်
အဆိုပါ post ကိုတန်ဖိုးထားသည်။ sbopkg နှင့်အတူမှီခိုအတော်လေးခံနိုင်ရည်ပုံရသည်။ ဒါက slackware နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲ။ အမှန်တရားကတော့အခုအချိန်မှာငါအဲဒါကိုသုံးတယ်လို့မထင်ဘူး။ ငါ Arch နှင့်အတူအလွန်အဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါ့လက်၌အခြားအမှုအရာရှိသည်, ဒါပေမယ့်ငါကအနာဂတ်အတွက် option တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
=) အတွက်ကျေးဇူးတင်စရာဘာမှမရှိဘူး ...
Long Slackware, Arch အသက်ရှည်, Linux ကိုအသက်ရှည် !!! ...
Slackware သည်အလွန်ရိုးရှင်းသော Distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိပြproblemနာကြီးသည် Unix အလွန်အကျွံဖြစ်နေခြင်းကြောင့် BSD နှင့် Gentoo ပင်သူ့အတွက်ပေးဆပ်ရသောစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ ဒီမှီခိုမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအခင်းအကျင်းက၎င်းကိုတော်တော်အားကောင်းတဲ့ Unix အရသာကိုပေးသည်။ ဒါပေမယ့်အခြားအရာအားလုံးလိုပဲငါအပြာရောင်ဒိန်ခဲကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါကလူများစွာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။
Archers အမြောက်အများထွက်ပေါ်လာသော်လည်း KISS ၏အထင်ရှားဆုံးမှာ Slackware, Lilo, Sys V နှင့်နေရာအနှံ့ BSD ပုံစံများဖြစ်သည်။ တိုတိုပြောရရင်ရိုးရှင်းမှုနဲ့ပြည့်နေတယ်။ များစွာသောသူတို့သည်အတိတ်ကာလတွင်နေထိုင်ခြင်းဟုထင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်ငါထင်သည်မှာ၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ်ပြissueနာဖြစ်သည်၊ အရာတစ်ခုသို့မဟုတ်တခုခုဖြစ်သည်၊ KISS အတွင်းတွင်အလယ်မြေပြင်မရှိ။
ငါလက်ရှိ openSUSE ၏သားအကြီးဆုံးသားဖြစ်သည်။ သူတို့မှာတူညီချက်များစွာမရှိသေးသော်လည်း Slackware စာအုပ်ကိုကြည့်ကြည့်ပါကမျိုးရိုးဗီဇအချို့ရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရပြီးကျွန်ုပ်ကိုချီးကျူးသည်။
DMoZ: chapó၊ သင်လုပ်နေတာကယူနက်စကိုကလူသားတွေရဲ့အရေးပါမှုမရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့လိုတယ်။ 🙂
= D Krel ငါ့သူငယ်ချင်း !!! ...
Slackware သည် Unix ဖြန့်ဖြူးသောအများဆုံးဖြန့်ဖြူးသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးတော်တော်များများသည် Krel ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကတိထားသည့်အတိုင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းသည်ယခင်ဆောင်းပါး၏အဆုံးမှာဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပြီးပြီ။ 🙂ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သို့သော်ခရက်ဒစ်အားလုံးသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သော်လည်းသင်ရေးသားချက်များနှင့်အတူထူးခြားသည့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေသည်
= D ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ...
အချိန်နှင့်ဗဟုသုတရှိသူများ၊ တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းနေလျှင်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းကိုစိတ်ထဲမထားသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောဆောင်းပါး။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် (ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်နောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်မံသက်တမ်းတိုးခြင်း) 😉ကျွန်ုပ်သည် Linux ကို W $ တစ်သက်တာပြီးနောက်အသုံးပြုသည်။ အချိန်ကိုရှုပ်ထွေးစေသော်လည်း Linux နှင့် S ကိုအိုလုပ်သူများအတွက်သူ့ဘ ၀ သည်ဤရှင်းပြချက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလှဆင်ထားသောအလွန်ကောင်းမွန်သောကွန်ပျူတာကိတ်တစ်ခုဖြစ်ရမည်။
ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်ငါ pacman နဲ့ yaourt = O installation form ကိုဖတ်တဲ့အချိန်ကထက်ပိုပြီးဆုံးရှုံးရတယ်လို့ခံစားရတယ်
ပြီးရင် xD ဆောင်းပါးကိုပြန်ဖတ်ရမယ်။
= D ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်ကို !!! ...
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ငါအရမ်းတန်ဖိုးထားတဲ့ Slackware နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ရဲ့အတွေးတွေအပေါ်အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ငါဝန်ခံရမယ်။
Slackware သည်ကျွန်တော့်အမြင်တွင်အပိုဖြည့်စွက်ချက်များမရှိသောအရှင်းဆုံး Linux distro ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအားစိတ်ကြိုက်စနစ်တစ်ခုကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရုံဖြင့်ဘာမျှမသေဘဲမထားခဲ့ပါ။ Laurel မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့သူတွေအတွက်ဒါဟာ distro မဟုတ်ပါဘူး။ Scouts အတွက်တကယ့်စနစ်တစ်ခုကအရာအားလုံးကိုနည်းနည်းချင်းစီလေ့လာသင်ယူချင်တယ်။ များစွာသောအသုံးပြုသူများကတန်ဖိုးထားကြဘူး။ ဒါဟာတစ်ဒါဇင်ကောင်းသောပျံ့ရှိပါတယ်သော distro ပါပဲ။ Linux လောကတွင်ရှိသကဲ့သို့တူညီသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Slackware သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ရိုးရှင်းသော OS ဆိုသည်ကိုတစေ့တစောင်းဖော်ပြသည်။ နက်ရှိုင်းသောနည်းပညာ၏ပရိုဂရမ်မာများသို့မဟုတ်စူးစမ်းရှာဖွေသူများအတွက်။
DMoZ နှင့် Slackware သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သသည်။
Caramba !!! "sbopkg" လို့ခေါ်တဲ့ဒီပုရွက်ဆိတ်လေးဟာအံ့ is စရာပါ။
ပြီးခဲ့သည့်ညက Chromium 24.0 (sbopkg ကိုမသုံးပဲ) ကိုစတင် install လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မှီခိုမှုတစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ရှိ၍ S ရင်းမြစ်နှင့် SlackBuilds နှစ်ခုလုံးကို download လုပ်ခဲ့သည် (Chromium and dependency) နှင့်ကျွန်ုပ်သည်သည်းခံခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဗားရှင်းခရိုမီယမ်သည်သည်းခံဖို့လိုတယ်
ထိုအခါငါအကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးဗီဒီယိုပလေယာ ... Vala ကို install လုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသတိရ ... နှင့် walaaa! ၎င်းတွင်မှီခိုမှု ၂၃ ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် installation တွင်ပါ ၀ င်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအပြင် (Sources နှင့် SlackBuilds များမှသာ) manual downloads ၄၈ ခုကိုပေးသည်။ Ufff !!! ငါစိတ်ဓာတ်ကျတယ်၊ ငါမငြင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ငါချစ်ရတဲ့ကိုလံဘီယာကကော်ဖီကိုပြင်ဆင်ပြီးအလုပ်ရခဲ့တယ်။
မှီခိုများကိုဒေါင်းလုပ်ချစဉ်ငါဤသင်ခန်းစာနှင့် "sbopkg" ဟုခေါ်သည့်လျှောက်လွှာကိုကြည့်လျှင်ရိုးရှင်း၊ သေးငယ်။ အပြစ်မရှိသော၊ "ဝှက်ထားသော" သို့သော်အလုပ်လုပ်ခြင်းမှာပုရွက်ဆိတ်ကဲ့သို့သော ... mmmm ... ကျွန်ုပ်သည် downloads ကိုရပ်တန့်ပြီးပုရွက်ဆိတ်ကိုသွင်းသည်။ ဒါကြောင့်သူအပေါငျးတို့မှီခိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်မည်မျှအံ့သြဖွယ် !!! ငါကော်ဖီသောက်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ဒါကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်အံ့အားသင့်မိပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Slackware မှာကျွန်တော်ဒါကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။
ငါသည်ဤ distro ပိုပိုပြီးချစ်ကြတယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော် sbopkg ကိုနှစ်သက်တယ်။
ငါအနှစ်သက်ဆုံးသော package များကိုထည့်သွင်းရန်အခြားသောနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းရှိသည်။
sbopkg သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ၎င်းတွင်မည်မျှမှီခိုနေရစေကာမူ၊ ဤ tool နှင့်အတူအထုပ်တစ်ခုကိုထည့်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ခရိုမီယမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားပြောတာကမှန်ပါတယ်၊ ဒီဗားရှင်းကို install လုပ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ရှည်ရှည်ထားဖို့လိုတယ်၊ ငါ့အရသာအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့် Firefox ရှိခြင်းဟာမထိုက်တန်ဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Linux ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် slackware ကိုပထမဆုံး install လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါကြိုက်တာကိုစနေပြီဒါပေမယ့်ငါ့ခေါင်းကိုချိုးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလားကြည့်ပါ ဦး ။
Vlc ကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်သည်အောက်ပါတို့ကိုစတင်သည် -
sbopkg -i "a52dec faad2 twolame lua portaudio libavc1394 libdca libdvbpsi libdvdcss libdvdnav libmatroska libmodplug libmpeg2 libshout libupnp schroedinger vcdimager faac musepack-tools ffmpeg speex live1394 libdc555c"
မှီခိုမှုမူကွဲအဟောင်းနှင့်ပိုမိုလက်ရှိအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောကြောင့်သို့မဟုတ်အမှားတစ်ခုအား installation အမှားတစ်ခုကိုပေးသောမှီခိုမှုများရှိခြင်းသို့မဟုတ် libmastroska ကဲ့သို့ပင် .h စာကြည့်တိုက်ပျောက်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမှားအယွင်းတစ်မျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံရတိုင်း၊ ပျက်စီးနေသောမှီခိုမှုကိုအခြား terminal တစ်ခုတွင်တပ်ဆင်ပြီး vlc အတွက်အရာအားလုံးကိုပြန်လည်စုစည်းရမည်။
ဒါကြောင့်ငါ Slackware နှင့်အတူမရှိတော့ပါ။
ဒီလမ်းညွှန်ကအထောက်အကူပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအထုပ်များစွာနှင့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
သင့်ကိုပိုကောင်းတဲ့ gentoo ကိုငါအကြံပေးလိုပါတယ်
အဘယ်ကြောင့် slackware ကျော် gentoo အကြံပြုသနည်း တစ်ခါတုန်းက Sabayon ကိုသုံးခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းတာကဒီစနစ်ဟာ ubuntu (သို့) linux mint ထက်နှေးကွေးနေတယ်။
မဟုတ်ပါ၊ sabayon နှင့် Gentoo တို့အကြားခြားနားသောကမ္ဘာရှိသည်။
Gentoo သည်လည်ပတ်နေသည့် operating system များထက်အဆတစ်ထောင်ပိုမြန်သည် (ကျွန်ုပ်ပုံကြီးချဲ့နိုင်သည်)၊ သို့သော်ဟုတ်ပါသည်၊ အလွန်မြန်သည်
Debian နှင့် slackware တို့ထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်။
Gentoo နဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်း Tete plaza နဲ့ငါစကားပြောရုံပဲရှိတယ်။
Slackbuilds.org သည်တရား ၀ င် slackware များကဲ့သို့တည်ဆောက်မှု script များနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ Slackbuilds ကိုထောက်ပံ့ခြင်းသည်၎င်းသည်တရားဝင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုမဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ။ ဤ site ကိုရံဖန်ရံခါကျောင်းထွက်ချိန်များရှိပြီးရံဖန်ရံခါထွက်ခွာသွားသောသူများအနေဖြင့်ဤ site ကိုပံ့ပိုးသူများကထိန်းသိမ်းထားသည်။ Slackbuild သည် Slackbuild တွင် rpm spec ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုတပ်ဆင်ရန်အဆင်သင့်ရှိသော package တစ်ခုဖန်တီးရန် script တစ်ခုဖြစ်သည်။ Slackbuilds ၏အခြားပံ့ပိုးပေးသူများသည် Slackbuilds.org တွင်နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Slackware ဖန်တီးသူပင်ဤတွင်ရှိနေသည်။ slackbuild ကိုစီမံခြင်းသည် package ၏ version ကိုတင်ခြင်းသာမက၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်သာမက၊ ကျွန်ုပ်ကိုမယုံလျှင် Slackbuilds.org ၏ development git ကိုစစ်ဆေးပါ။
Luis Alberto ။ ဟုသူကပြောသည်
ငါ OS ကိုအကြောင်းအများကြီးဖတ်ပြီးကတည်းကငါ slackware ကို install လုပ် Linux ကို၏ကမ္ဘာကြီးကိုစတင်နေပြီနှင့်ငါ့လက်ရှိပြproblemနာငါ OpenOffice install လုပ်လို့မရဘူးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကျေးဇူးပြုပြီးထောက်ခံမှုကိုတောင်းခံပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သို့ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးပါ။
LUIS ALBERTO သို့ပြန်သွားပါ
မင်းကငါ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်၊ ငါအစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရတာကုန်ကျတယ်၊ ငါပြတင်းပေါက်တွေမှာပြတင်းပေါက်ထဲရောက်နေတယ်၊ ​​တစ်ခုတည်းသောစနစ်က slackware 14.2 ပဲ။ ငါသုတ်ပဝါကိုသင်ဆဲဆဲပဲ hahaha ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
MacBird: xfce အတွက်အခင်းအကျင်း
GTK3ကိုအထောက်အပံ့ဖြင့် Synaptic ကိုမည်သို့သုံးရမည်နည်း